Kobcinta khibrada isticmaalka alaabta gudaha - ዜና ከምንጩ
Kobcinta khibrada isticmaalka alaabta gudaha
Sida la wada ogsoon yahay badeecadaha ay Itoobiya dhoofiso ayaa ka badan inta ay so dhofsato
Arrintan ayaa inta badan sabab u ah is-waafajinta u dhexeeya saadka gudaha iyo baahida macaamiisha, balse waxaa sidoo kale la sheegay inay sabab u tahay khibradda yar ee muwaadiniinta ee isticmaalka alaabadooda.
Itoobiya oo hoos u dhac ku yimid is qab-qabsiga waddanku waxa uu ka dhigay waddan wax dhoofiya oo dhaqaale badan ku tiirsan.
Iyadoo tayada badeecadaha dalka laga soo saaro ay tahay mid la jaanqaadaysa heerka suuqyada caalamka, isla markaana ay yihiin kuwo qiimo jaban, haddana u janjeera isticmaalka wax soo saarka dalka oo ah mid aad u hooseeya oo aan inta badan loo arkin mudnaanta wax soo saarka gudaha.
Taasi waxay keentay in bulshadu kalsooni aad u hoosaysa ay ku qabaan wax soo saarka dalka,kuwaas oo wax soo saarka dalka wax soo saarkoodu aad uga jaban yahay wax soo saarka dalka,maadaama ay yihiin alaab shisheeye
Taas beddelkeeda, waxa soo ifbaxaya ifafaalo muujinaya in badeecadaha Itoobiya loo bixin doono magac cusub oo suuq ah oo waddan kale laga leeyahay, laguna iibin doono qiimo sare.
Waxa jira dad badan oo sheegaya in arrintani ay dalka u geysatay arrimo badan, ka dib markii ay ka hortagtay kobaca wax soo saarka dalka, shaqaale la’aanta iyo shaqo la’aanta.
Waxaa la sheegaa in wadamada bariga Asia sida China, Japan, Thailand iyo kuwa kale ay bilaabeen in ay isticmaalaan wax soo saarkooda, iyagoo garwaaqsan in xalka ugu weyn ee cadaadiska iyo cadaadiska reer galbeedka uu yahay kobcinta dhaqaalahooda.
Singapore, South Korea, Taiwan iyo Hong Kong, oo sidoo kale loo yaqaano Asian Tigers, ayaa la rumeysan yahay inay fure u yihiin kobacdooda degdega ah ee wax soo saarkooda, tignoolajiyada, aqoonta iyo waxyaabaha kale ee la xiriira.
Sidoo kale, waxaa jira dad leh dagaalkii labaad ee aduunka ka dib, reer Yurub waxay ka baxeen dhaqaale xumo, sababtoo ah waxay xoogga saareen aqoonta iyo wax soo saarka gudaha.
Burburkii dagaalku keenay waxay ku kaliftay inay raacaan dariiqo u saamaxaya inay horumariyaan dhaqaale.
Waxa ay ahayd in ay wax soo saartaan oo ay ka faa’idaystaan cududooda iyo dhulkooda, halkii ay ka keeni lahaayeen wax kasta oo ay u baahan yihiin gargaar iyo wax soo iibsi dalal kale.
Waxaa la sheegay inay wax soo saarkooda u dhoofin jireen dalal kale, dhaqaale ahaanna ay ku horumareen.
Taas bedelkeeda, dalal badan oo Afrikaan ah ayaa weli ku tiirsan dhaqaalaha horumaray iyo cadaadis siyaasadeed oo xooggan sababtoo ah ma madaxbannaana dhaqaale ahaan.
Waddamadani waxay si fudud u soo dhoofsan karaan alaabta ceeriin iyo shaqaale.
Marka laga yimaado is-bedbedelka suuqa ee ka dhashay sarifka lacagaha qalaad, waxa kale oo ay taasi ka hor istaagaysaa in ay helaan aqoon iyo teknoloji heer qaran ah oo ay lumiyaan saamigii ay ku lahaayeen suuqyada caalamka.
Waa dammaanad inaan dalalku ka baxsan karin cadaadis siyaasadeed haddaanay ku sii socon inay gaadhaan madaxbannaani dhaqaale.
Waxa jira dad soo jeedinaya in isticmaalka wax soo saarka gudaha ee Itoobiya maanta aanu ahayn wax lagu raaxaysto ama la doorto, balse ay tahay mid qasab ah oo lama huraan ah.
Waxa la yidhi isku filnaansho ayaa loo baahan yahay in la is-bixiyo, iyadoo ay jiraan xoogag dalka qas ka wada oo damiir laawayaal ah, dayn iyo gargaar iyo hawlo kale oo noocaas ah.
Tani waxay dhinac ka fududaynaysaa culayska dhaqaale ee dalka, dhinaca kalena waxay ka caawinaysaa abuurista muwaadiniin iyo warshado wax soo saar leh, una horseeda koboc dhaqaale oo wanaagsan.
Iyadoo dhawaan Itoobiya mamnuucday xeerka kobaca iyo fursadaha Afrika, waxaa muhiim ah in la yareeyo wax soo saarka gudaha iyo in la yareeyo isticmaalka gudaha.
Itoobiya waxa ay caan ku tahay wax soo saarka cayriin (Digirta iyo Kafeega, Miraha iyo Khudaarta, Hargaha iyo Saamaha), waxa kale oo ay caan ku tahay wax soo saarka kala duwan.
Dharka, kabaha iyo alaabada kale ee hargaha ayaa ah kuwa ugu muhiimsan kuwan.
Sida ay khubaradu sheegeen, Itoobiya waxay ku bixisaa balaayiin dollar sannadkii soo dejinta alaabada hargaha ah.
Si kastaba ha ahaatee, waxay sheegeen in haddii la dhimo kharashka qaybtan, la heli karo shaqaale ku filan iyo alaabta ceeriinka.
Dhibaataduse waxa weeyi in silsiladdii ganacsiga hargaha dalka oo ilaa hadda sii xumaatay, isla markaana uu qofka muwaadinka ahi caadaystay in uu isticmaalo wax soo saarka dalka, taas oo dhaawac ku ah faa’iidada ay leedahay.
Sharci la’aanta dalka oo la sheegay inay laba jibaar ka badan tahay wax soo saarka iyo dhoofinta sharci darrada ah ee dalka ka jirta, taasi oo la sheegay inay suuqa ka saarayso wax-soo-saarkii waddaniga ahaa, isla markaana ay khalkhal geliso dhaqaalaha dalka.
In kasta oo ay soo noqnoqonayaan codsiyo ka yimid shirkadaha wax soo saara si ay arrintan wax uga bedelaan, dawladdu wali xal ma helin, dareen la’aan awgeed.
Marxaladan aynu ku jirno ee ah culaysyada dibadda ee dalka ka jira iyo culays dhaqaale oo hooseeya, waxa loo baahan yahay in aynu kor u qaadno tayada iyo dhaqanka wax-soo-saarka gudaha.
Dhawaan waxa lagu dhawaaqay mashruuc heer qaran ah oo ka qayb qaadanaya warshadaynta hargaha.
Mashruucani waa mashruuc lagu soo saarayo kabaha, bacaha iyo suumanka ardayda oo wax ka taraya badbaadinta qaybta hargaha ee ay leeyihiin shirkado ajaanib ah, isla markaana hoos u dhigi doona qiimaha sarifka lacagaha qalaad ee qaaliga ah.
Mashruuca waxa la filayaa in lagu badbaadiyo 70 milyan oo doolar sanadkii oo sarifka lacagaha qalaad ah iyo abuurista 15,000 oo ganacsi oo cusub oo isugu jira kuwa yaryar iyo kuwa dhexe.
Marka la eego tirada badan ee shaqo abuurista, ayaa la sheegay in haddii mashruucan lagu guuleysto ay suurtogal tahay in sarifka lacagaha qalaad lagu dhoofiyo.
Banda Tilahun oo ah madaxa xidhiidhka dadwaynaha ee machadka horumarinta hargaha iyo warshadaha ayaa saaka u sheegay magaalada Addis ababa in si la mid ah hargaha iyo hargaha dibada laga keeno, waxaanu yidhi “Waxa aanu codsanaynaa in cashuurta laga dhimo.
Waxa ay tilmaameen in ay sabab u tahay badeecooyin aan la soo dejin karin inta dalka gudihiisa laga soo saarayo.
“Maadaama aan nahay suuq xor ah, waxa kaliya ee aan ku hagaajin karno dakhligeena waa kordhinta canshuurta iyo kordhinta tayada iyo tayada badeecada,” ayuu yidhi.
Waxa lagu qiyaasaa in 60 milyan oo kabo ah iyo 30 milyan oo bac ah la soo saari karo sannadkii ardayda oo keliya.
Waxa dalka ka jira 22 warshadood oo wax soo saara hargaha iyo 16 warshadood oo yaryar iyo kuwo dhexdhexaad ah.
Markaa, wadar ahaan, waa 38, laakiin dhammaantood maaha, xitaa haddii ay awooddooda buuxda sameeyaan, waxay soo saari doonaan oo keliya 4 milyan oo kabo sannadkii, ayuu yidhi.
Wuxuu xusay in suuqa uu ka jiro farqi weyn oo machadku uu ku dadaalayo sidii loo abuuri lahaa ganacsiyo cusub oo isugu jira kuwa yar yar iyo kuwa dhexe iyadoo xoogga la saarayo wax soo saarka gudaha iyadoo la dhimayo wax soo saarka dalka.
bare cilmiga dhaqaalaha ka dhiga jaamacada Selale ayaa sheegay in khibrada yar ee aynu u leenahay isticmaalka wax soo saarka ubaxa dalkeena ay sabab u tahay hab-dhaqanka guracan ee wadamada horumaray ay inagu dhiseen.
Waxa ay ku andacoonayaan in ay naga dhigteen in ay naga fiican yihiin iyaga oo isticmaalaya calaamado iyo xayaysiin ay sameeyeen warshadahooda waaweyn ee wax soo saarka.
“Hadda ma lihin awood wax-soo-saar ku filan, qaar badan oo ka mid ah wax-soo-saarkayaduna kuma jiraan kuwo ku tartamaya tayada iyo qiimaha, dhammaan alaabooyinka kuma beddeli karno wax-soo-saarka gudaha,” ayuu yidhi.
Waxa kale oo ay sheegeen in cashuurtu ay abuurto kala duwanaansho qiimo badan oo u dhexeeya badeecadaha dalka iyo kuwa la soo dejiyo, lana kordhiyo baahida wax soo saarka dalka.
Wuxuu sheegay in mabda’a suuqa xorta ah uu yahay mid fikradeed balse dalalka horumaray ee ku dhaqma ay iyaguna xaddidi doonaan wax soo dejinta iyo dhoofinta.
Waxa uu sheegay in sida ugu fudud ay tahay in canshuurta la kordhiyo lana kordhiyo kootada laga soo dejiyo badeecadaha la soo dejiyo, isagoo sheegay in horumar lagu gaari karo in la kordhiyo wax soo saarka gudaha iyo isticmaalka.
Waxa kale oo ay sheegeen in ay aaminsan yihiin in isticmaalka wax soo saarka dalka uu noqdo mid muujinaya waddaniyadda.
Waxa ay sheegeen in ay muhiim tahay in la ogaado in ay jirto fursad weyn oo ay dadku ku isticmaali karaan wax soo saarka dalkooda.
Sidoo kale waxa uu sheegay in ay muhiim tahay in wax soo saarka gudaha loo soo jeesto si loo dhimo shaqo la’aanta, loogana faa’ideysto kheyraadka aan weli laga faa’ideysan.
Waxa kale oo uu tilmaamay in arrintani ay xukuumaddu aad u hoosayso, isaga oo sheegay in aanay haboonayn in kuraas xafiiseedyo kala duwan la keeno iyo agab kale oo si fudud dalka looga soo saari karo.
Waxa kale oo uu sheegay in dadka caanka ah iyo siyaasiyiinta ay hormuud ka noqdaan wax soo saarka dalkooda oo ay ka hor mariyaan wax soo saarka dibadaha.
Total views : 7537627